လျှာပေါ်ဝဲပျံနေတဲ့အရသာတွေပေးစွမ်းနိုင်သော Imperial Garden ? ? ? ………. – FoodiesNavi
စားမှာပဲဝါးမှာပဲငါ့ကိုလာမတားနဲ့ ? ? ? ဆိုတဲ့အစားဆိုရှေ့ဆုံးကပြေးလာတတ်သူ ??‍♀️ ??‍♀️ ??‍♀️ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် Foodies navi ကနေဆိုင်ရွေးမမှားစေဖို့အတွက် ?‍♀️ ??‍♂️ Imperial Garden ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ?‍♀️ ?‍♀️ ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ဒင်းဆမ်းကိုမှခုံမင်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ? ? အစားတလိုင်းတို့အတွက် ဒင်းဆမ်းနူးနူးအိအိလေးတွေရရှိနိုင်သလို ? ? ? ? တရုတ်အစားအစာကိုမှ ရူးသွပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစားတလိုင်းတို့အတွက်လည်း အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ? ? ? ? ဟင်းလျာတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကိုတော့– ? ? ? ? ? ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနဲ့စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်မှာတည်ရှိတဲ့ Myanmar Plaza မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ?
Imperial Garden မှာဆိုရင်တော့ ဒင်းဆမ်းမျိုးစုံအပြင် ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ဝက်ရှောင်လုံပေါင်း ၊ နိုင်လွန်ပုဇွန်ဖက်ထုပ်ပေါင်း ၊ မာလာကြက်သားဖက်ထုပ် ၊ ဝက်သားကင်ပေါက်စီ ၊ အမဲအူမကြီးမာလာအစပ်ကြော် ၊ အာလူးအမဲသားမြေအိုး ၊ အမဲသားငရုတ်ကောင်း ၊ မုန်လာဥအမဲကလီစာချက် ၊ ကညွတ်အမဲသားကြော် ၊ ရေမုန်ညင်းကြော် ၊ မုန်ညင်းနှင့်မှိုကြော် ၊ ခဝဲသီးကြက်ဥကြော် ၊ ဘိုစားပဲကြော် ၊ ကြာစွယ်ကြော် ၊ အိမ်တွင်းဖြစ်တို့ဟူးခရုဆီ ၊ နှစ်ရောင်ခြယ်ပန်းပွင့် ၊ ပုဇွန်ကိုက်လံ ၊ ဟူနန်တို့ဟူးကြော် ၊ Hot Plat တို့ဟူးချက် ၊ ဟူနန်ခရမ်းသီးပုဇွန်ချက် ၊ ဂုံးကြက်သွန်ဖြူကြာဇံပေါင်း ၊ ငါးကြင်းဗိုက်သားပဲပုပ်စေ့ပေါင်း ၊ ပုဇွန်မှိုကညွတ်ကြော် ၊ ယောက်သွားအခြောက်ကြော် ၊ ငါးအသားလွှာကြော် ၊ ငါးချိုချဉ် ၊ ချဉ်စပ်မာလာငါးချက် ၊ မွှေးရနံ့ဘဲကြွပ်ကြော်နဲ့ပန်ကိတ် ၊ ကြက်သားမှိုနှစ်မျိုးချက်စတဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာအစုံအလင်ကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ?
အမျိုးစုံလှတဲ့ဒင်းဆမ်းတွေကို ပူပူနွေးနွေးနူးနူးအိအိလေး အရသာရှိအောင်ပေါင်းထားတာကြောင့် ? ? ? အိစက်စိမ့်ဝင်စွာလျှာပေါ်မှာပျံဝဲနေစေပြီး ? ? ? ? တရုတ်ဟင်းလျာတွေထဲမှာလည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အသားငါး ? ? ? ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ? ? ? ? ? ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် အရသာမြည်းစမ်းကြည့်ရုံနဲ့တင် လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်မှုကိုခံစားရရှိစေနိုင်မှာပါ။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰⏰ တနင်္လာနေ့ကနေသောကြာနေ့ထိကို မနက်(၈)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားပြီး ??? သောကြာနေ့ကိုတော့ မနက်(၈)နာရီကနေ ည(၁၀)အထိဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ ⏱⏱⏱ စနေနေ့ကိုတော့ မနက်(၇)နာရီခွဲကနေ ည(၁၀)နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားပြီး ⏰⏰ တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတော့ မနက်(၇)နာရီခွဲကနေ ည(၉)နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ? ? ဒင်းဆမ်းစုံစုံလင်လင်နဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာကိုမှမြည်းစမ်းခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Imperial Garden ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ရွေးမမှားမှာအသေအချာပဲနော်။ ? ?
Image Source : www.facebook.com/imperialgarden